5 Wathi uThixo ukukhanya yimini, wathi ubumnyama bubusuku. Kwahlwa, kwasa:yangumhla wokuqala.
8 Wathi uThixo isibhakabhaka ngamazulu. Kwahlwa, kwasa:yangumhla wesibini.
13 Kwahlwa kwasa:yangumhla wesithathu.
19 Kwahlwa, kwasa:yangumhla wesine.
23 Kwahlwa, kwasa:yangumhla wesihlanu.
24 Wathi uThixo, Umhlaba mawuphume imiphefumlo ephilileyo ngohlobo lwayo:izinto ezizitho zine, nezinambuzane, nezinto eziphilileyo zomhlaba ngohlobo lwazo. Kwaba njalo.
29 Wathi uThixo, Yabonani, ndininikile yonke imifuno evelisa imbewu, esemhlabeni wonke, nayo yonke imithi eneziqhamo zemithi evelisa imbewu:yoba kukudla kuni.
31 Wakubona uThixo konke akwenzileyo, nanko, kulungile kunene. Kwahlwa, kwasa:yangumhla wesithandathu.